…अनि मेरो कविताको किताब ‘बेस्ट सेलर’ बनिछाड्यो – MySansar
मलाई सानै देखि साहित्यमा निकै रुची थियो । तर रुची भएर मात्र के गर्नु, लेखनलाई कलम फिटिक्कै चल्दैनथ्यो । रुची हुनु र सृजना शक्ति हुनुमा धेरै भिन्नता रहेछ । स्कुलमा ज्ञवाली सरले छन्दमा कविता भन्दा म मात्रै होइन सारा स्कुल नै मन्त्र मुग्ध हुन्थ्यो । स्कुलको वार्षिकोत्सवमा ज्ञवाली सरको कविता सुन्न विद्यार्थीहरु मात्र होइन अभिभावकहरु पनि लालायित हुन्थे । बैसाखको अन्तिम सातामा धौलु बगियाको किनारमा रहेको आँपको बोट मुनि बार्षिकोत्सबमा सरसर चलेको चिसो हावा अनि आँपको फुल चुस्न आएका भमरा र मौरिहरुको सुमधुर धुनसँगै जब ज्ञवाली सरको त्यो कविता गुन्जन्थ्यो हामी सबै लठ्ठ हुन्थ्यौं ।
दुई चार हरफहरु राम्रैसँग जान्थे तर त्यो भन्दा माथि म कहिल्यै उक्लिन सकेन । के लेख्ने ? कहाँबाट आउछ त्यत्रो सिर्जना ? सजिलो थियो र ?
“तँलाई बिश्वाश लाग्दैन ? ल हेर” भनेर आफ्नो नौ कक्षाको पुस्तक निकालेर एउटा कविता देखायो ।
“तँलाई अझ बिश्वाश लागेन, पख म आफै लेखेर ज्ञवाली सरलाई देखाउछु अनि त बिश्वाश गर्लास नि” भनेर अर्को दिन एउटा कविता लेखेर
उसले ज्ञवाली सरलाई देखाएछ ।
तर फेरि उही स्थिती, कहाँबाट फुर्नु ? भित्र भए पो बाहिर निस्कने हो, भित्र त खोक्रो थियो । तर जे भए पनि लेख्छु भनेर मैले मनमा जे
आयो त्यही लेख्दै कम्प्युटरमा राख्न थालें ।
“हुन्छ, के भो र त्यति सजिलो छ भने ।” मैले पनि आफू कवि बन्ने ध्याउन्नमा दुई चार हजारलाई पैसै देखिन । उसको फुर्तिले मलाइ पनि मेरा लघुकथाहरुलाई कविता बनाउन प्रेरित गर्‍यो । म आफै त के सक्थेँ र ? श्रीमतीले त्यसको जिम्मा लिइन् ।
त्यही धौलु बगिया, त्यही आँपको रुख, त्यही बैसाखको अन्तिम साता । फरक यत्ति थियो कि पहिले कोइली कण्ठ जस्तो स्वर भएका ज्ञवाली सरका कविताहरुले त्यो वाताबरण गुन्जिन्थ्यो, आज भने मेरा अर्थ न बर्थ का ‘प्रसिद्ध’ कविताहरुले त्यहाँ हल्ला मचाई रहेका थिए ।
आफूलाई हिनता बोध हुँदाहुँदै पनि म निकै फुर्ति र रवाफका साथ घोक्रो फुलाएर चिच्याई चिच्याई आफ्ना ती कविताहरु वाचन गर्दै थिएँ । खालि एउटा डर थियो— कतै ज्ञवाली सरले आफूले पढाएको विद्यार्थीले त्यस्ता स्तरहिन कविता वाचन गरेको थाहा पाउनु भयो भने त्यो बेला दाइलाई थर्काए जस्तै मलाइ पनि थर्काउनु पो हुन्छ कि?
(राष्ट्रिय कविता महोत्सवसम्बन्धी ब्लगमा आएको कमेन्ट)
1 thought on “…अनि मेरो कविताको किताब ‘बेस्ट सेलर’ बनिछाड्यो”
Nice story with sarcasm!